अब के हुन्छ ? ओली सरकारलाई आयो ७२ घण्टे अल्टिमेटम — SuchanaKendra.Com
अब के हुन्छ ? ओली सरकारलाई आयो ७२ घण्टे अल्टिमेटम
संघका महासचिव डा.बद्री रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डा.केसीको जीवन रक्षाका लाथि हुनसक्ने विरोधका कार्यक्रमहरुलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यथाशिघ्र वार्ता टोली गठन गरी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता र सम्वादको माध्यामबाट उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । संघले ७२ घण्टाभित्र वार्ता टोली गठन गरी डा.केसीको जीवन रक्षाका लागि कुनै पहल अघि नबढाइए जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न वाध्य हुने यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने गम्भिर परिस्थितिप्रति सरकारनै जिम्मेवार हुने चेतावनी दिएको छ । जुम्लाबाट केही दिनअघि काठमाडौं आएका डा.केसी केही दिनअघि देखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत रहेका छन् ।
पछिल्लो समय संक्रमणको अवस्था खराब भएको भन्दै मन्त्रालयले चाडबाडमा समेत विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। दसैंमा लाखौं मानिस काठमाडौं उपत्यकाबाट घर जाने भएपनि अहिले उपत्यका नै संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। आइतबार मात्र उपत्यकामा एक हजार ५ सय ९९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभर थपिएका संक्रमितमध्ये उपत्यकाका मात्र ७० प्रतिशत छन्। दसैं नजिकिँदै गर्दा उपत्यकाबाट लाखौं मानिस घर जानलाई तयार छन्। विज्ञहरूले समेत उपत्यकाबाट घर जानेहरूबाट गाउँगाउँमा संक्रमण फैलिने जोखिम रहेको औँल्याएका छन्।